Wadarta Ilaalinta cookie waa cibaaro weyn oo Firefox ah oo loogu talagalay Android | Androidsis
Waa maxay Wadarta Ilaalinta cookie-ku, waa ugub weyn ee Firefox ee loogu talagalay Android
Mozilla waxay diyaar u tahay inay kamid noqoto kuwa kula dagaalamaya adeegsiga xogteena sheeko cusub oo ku soo galaysa biraawsarkaaga Android: Wadarta Ilaalinta Kukiyada. Muuqaal cusub oo laga heli karo Habka adag ee Firefox.
Aynu nidhaahno Wadarta Ilaalinta buskudku waxay xaqiijineysaa in degel kasta uu helo "jar jarka", Kukiyada la filayo in loo adeegsado in lagu raaco marinka aan ka sameyno ka gudubka mid ka mid ah bogagga kale.
1 Sidee daalacayaasha kale ay u isticmaalaan cookies
2 Sidee ayuu u shaqeeyaa Total Cookie Protection?
3 Kaliya marka laga reebo isticmaalka cookies
Sidee daalacayaasha kale ay u isticmaalaan cookies
5 maalmood kahor Mozilla waxay ku dhawaaqday imaatinka Firefox oo leh Total Cookie Protection, a horumar gaar ah marka laga hadlayo arrimaha gaarka ah ku xiran isticmaalka qaabka adag ee biraawsarkan oo aan u hayno Android.
Runtii waxa loo yaqaan 'Total Cookie Protection' ayaa mas'uul ka ah "in la xiro" buskudka isla bogga ay ku abuureen, kaas oo ka hor istaagaya shirkadaha inay adeegsadaan buskudyadaas si ay ula socdaan degellada aan booqanno.
Annaguna waxba odhan mayno gaar ahaan waxa wanaagsan ee ku saabsan buskudka, maaddaama aan halkaa u joogno wax, laakiin waa run in marka la eego u nuglaanta xogtayada ay leedahay gees kale, oo ka "khatar badan". Iskusoo wada duuboo, way ka khatar badan tahay sababta oo ah aqlabiyada badan ee daalacashada waxay u oggol yihiin buskudyadan in ay wadaagaan shabakadaha kala duwan, sidan ayaa websaydhadaasi ku tilmaami karaan marinkeena "ogaada" meesha aad u socoto iyo meesha aad ka timid.
Waxay u egtahay inay kugu dhejinayaan geolocator markaad booqanayso dukaanka iyo bakhaarkaasi wuxuu awood u leeyahay inuu ogaado inta jid ee aad tagtay iyo wixii ka dambeeyay ee aad sameysay.
Iyo sida, noocyada nooca loo yaqaan 'cookies' waxay awood u leeyihiin inay abuuraan astaamo gaar ah oo ku saabsan isticmaalka internetka si aan ula wadaagno xogtaas shirkadaha mas'uulka ka noqon doona inay noo soo diraan xayeysiin toos ah oo ku aaddan danahayaga, dhadhankeenna, dhiirrigelinta, rabitaannada iyo inbadan; Yaanay dhicin inuu lahadlo qof ay wada shaqeeyaan taleefanka gacanta ama uu raadsado wax, oo dhawr maalmood meelkasta oo uu tago, xayeysiisyada ayaa ka muuqda Instagram, webka ama barnaamijyada kale.
Sidee ayuu u shaqeeyaa Total Cookie Protection?
Kahor sharaxaadda sida Wadarta Ilaalinta Kukiyada u shaqeyso, waa inaad ogaataa taas 2019, Firefox waxay soo bandhigtay Ilaalinta Raadinta ee La Kordhiyay, si looga joojiyo cookies-ka shirkadaha loo yaqaan ama loo aqoonsaday inay yihiin raad-raaca shuraakada Mozilla ee Disconnect.
Laakiin waxay umuuqataa in Mozilla aysan kaliya ku ekaan halkaas oo ay rabto inay qaado talaabo dheeraad ah oo taas lagu hubinayo ma jirto shirkad awood u leh inay nala socoto markii aan gelayno Qaabkaas adag ka dhex raadinta Firefox ee Android.
Wadarta Ilaalinta cookie-ku waxay u shaqeysaa sidan oo kale taasi waxay haysaa "weel cookie" oo u gaar ah degel kasta oo aad booqato; taas oo ah weelka cookie-ka. Waqti kasta, degel kasta, ama dhinac saddexaad oo ku duugan hal, wuxuu ku meeleeyaa cookie aaladda biraawsarkaaga. Kukiyadaas waxay ku egtahay "weelka cookie" ee loogu talagalay websaydhkaas., sidaa darteed lama wadaagi karo degel kale.
Kaliya marka laga reebo isticmaalka cookies
Wadarta Ilaalinta buskudka ayaa kaliya ka dhigaysa mid ka reeban isticmaalka buskudka iyo waa markay xiriir la leedahay soo galitaanka oo ay tahay inaan ku samayno web oo leh aqoonsigeenna. Markay "garato" inay ujeeddadaadu tahay inaad adeegsatid adeeg bixiye, waxay ku siin doontaa rukhsadaha lagama maarmaanka u ah inaad ku isticmaasho buskudka "iskutallaabta", isla kan aad booqanayso.
Marka taas waayo-aragnimadu waa ka sii fiican tahay bixinta amaan aad u sareeya oo ku saabsan asturnaanta xogtayada iyo inaanan naga maqnayn awood u lahaanshaha "galitaanka" boggaga sida aan ugu qaban lahayn qaab caadi ah Firefox ee Android.
Marka lagu daro Ilaalinta Supercookie ee lagu dhawaaqay bishii hore, oo leh Total Cookie Protection oo firfircoonaan Mozilla ayaa awood u leh inay kaa horjoogsato inaad isticmaasho biraawsarkaaga websaydhadu waxay awood u leeyihiin inay ku calaamadeeyaan; hadda Firefox Proton ayaa ina sugaysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Waa maxay Wadarta Ilaalinta cookie-ku, waa ugub weyn ee Firefox ee loogu talagalay Android
Jetpack Joyride 2 wuxuu yimid gobol ahaan si uu usii wado xiisaha Barry Streakfries-ka weyn